Naya Post Nepal | प’क्राउ परेकी भनिएकी शर्मिला वाइबा बुटवलमा भेटीईन, भन्छिन् जेल जान्छु तर रेखा थापा संग माफी माग्दिन् (भिडियाे हेर्नुस् )
प’क्राउ परेकी भनिएकी शर्मिला वाइबा बुटवलमा भेटीईन, भन्छिन् जेल जान्छु तर रेखा थापा संग माफी माग्दिन् (भिडियाे हेर्नुस् )
आफुलाई अभियन्ता भन्ने केही ब्यक्तिहरुलाई प्रहरीले पल शाह घ’ट नामा प’क्राउ गरेको छ । एक किशोरीले कर णी गरेको भन्दै पल शा ह वि’रुद्ध प्रहरीमा दिएको उजुरी पछि शाह प’क्रा’उ परेका छन् । शा हको पक्षमा नारावाजी गर्दै तनहुँ प्रहरी कार्यालयमा पुग्ने र किशोरी को चरित्रका बारेमा
कड्कलवाजी अभिब्यक्ति दिनेहरुलाई प्र’हरीले का’रवा’ही थालेको छ । प्रहरीको साइवर सेलले किशोरीका बारेमा अनावश्यक टिप्पणी गर्नेलाइ का’रवा’ही गर्ने चेतावनी दिएपछि तनहुँ प्रहरी कार्यालय गेट मा नारावाजी गर्न पुगेका अभियन्ता र युट्युवरहरुले तनहुँ छो’डेका छन् ।
यसैबीच नायिका रेखा थापाले किशोरीको पक्षमा दिएको अभिब्य क्तिलाई लिएर रेखाकै मान मर्दन हुने गरी अ’भिब्यक्ति दिएपछि केही युट्युवरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । युट्युवर राहुल थापा, हरी उ दाशी पक्राउ परेका छन् । केही मिडियामा शर्मिला वाइवा पनि प’क्रा उ परेको समाचार प्रकाशन भएको थियो ।
त्यो कुराको पुष्टि भने प्रहरीले गरेको थिएन । शर्मिला वि’रुद्ध नायि का रेखाले उजुरी दिएकी थिइन् । मिडियामा शर्मिला पक्राउ भन्दै स’माचार प्र’काशन भएपछि शर्मिलाले त्यसको खण्डन गर्दै आफु वुटवलमा रहेको बताएकी छन् ।
उनले आफु केही नीजि कामले बुटवल पुगेको र आफ्नो फोन पनि अफ नगरेको बताएकी छन् । यदि प्रहरीले बोलाएमा आफु प्रहरीको स’म्पर्कमा जाने पनि बताएकी छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जाल फेसवुकमा स्टाटस लेख्दै आफु पक्राउ नपरेको बताएकी हुन् । केही युट्युवमा पनि आफ्ना बारे गलत स माचार प्रकाशन भएको भन्दै उनले आपत्ती जनाएकी छन् । उनि संग गरिएको कुराकानीको भिडियो तल हेर्नुहोला :
यो पनि ,,काठमाडौं । अभिनेता निखिल उप्रेतीले देशलाई प्रेम गर्न स’म्पू’र्ण नेपाली नागरिकमा आ’ह्वान गरेका छन हिन्दुराष्ट्र र राजसं स्था प’क्षध’र एकी कृत शक्ति नेपाल घो”षणा समारोहलाई स’म्बो ‘धन
गर्दै उ,प्रेतीले देशमाथि घा’त गर्ने दुश्मनहरुको प्रतिकार गर्न अपिल गरेका हुन,!“न,कारात्मक शक्ति बढ्दै जाँदा नेपालको राजनीति आ जको अवस्थामा पुगेको उप्रे’तीको भनाइ थियो ।
आज राजनीति गर्ने ती नेताहरु कोठा कोठामा पार्टीको घो”षणा भइरहेको छ तर मिल्न सक्ने क्षमता सा’हस धेरै कमले देखाउन सक्छ ।
जब देश वि’रामी हुँदा देशको उपचारका लागि मिल्न स’क्दैनौ भने ती काल्पनिक र कल्पनामा रहेका पार्टी र मो”र्चाहहरुले भो’लि के गर्न सक्ला न भन्दै ,?
“उनले प्रश्न गरे,्ति’नीहरु कसरी फरक हुन सक्छ कि अहिले देशमा वरिष्ठ नेताका नाममा चिनिएकाहरु´ व,क्तव्य पल्टाएर हेरौं ।
आफ्नै पार्टीभित्रको विभाजन, कार्यकर्ताभित्रको तिक्तता र देशभित्र उनीहरुले जानेको एउटै खुबी हो आफू आफूमै´ वै` मनश्यता”
उप्रेतीले नेपालका पार्टीहहरु कुनै पनि फरक नभएको तर्क गरे । ’यी सबै पार्टीहरु कुनै अलग अलग पार्टी होइन ।
हामी वर्षौदेखि भ्रममा रहिरह्यौं, यो पार्टी त्यो पार्टी भनियो, तर यिनी हरु अलग पार्टी होइनन् [जब एउटा विरामी र दोस्रो ’विरा मीको गुण उस्तै छ भने त्यसलाई अर्को वि’रामीमा लिन मिल्दै न`”
घोषणापत्र बोर्डमा राख्दैमा राम्रो र नराम्रो पार्टी छुटिन्छ भन्ने भ्रम हो,’ उनले भने ।उनले नेताहरु कै कारण देश बन्न नसके को पनि तर्क गरे । यिनी हरुले कहिले पनि देशलाई शान्त तु´ल्या उन सक्दै नन् ,जब देशमा शान्ति छाउँछ उनी हरुको केही चल्दैन ।हामी पनि उनीहरुकै पछि लाग्यौ”,
किन लाग्यौ ?! कि बनेन नेपाल ? धेरै कमले म´हसुस गरेका छन् । देशका लागि राम्रो गर्नेलाई हामी घर बसेर गाली गर्न थाल्छौं । आ फ्नो स्वार्थ हेर्छौं ।
फेरि चुनाव हुँदैछ । यस्ता व्यक्तिहरुलाई फेरि भोट दिने ?’ उनले प्रश्न गरे `अहिलेका नेताहरु बाट देश विकासको आशा गर्न नसकिने उन को भनाइ थियो”
यी व्यक्तिहरुले फेरि देश विकास गर्छन् के आशा होला उनको प्रश्न? आफ्नो भावी सन्ततिको माया छ भने यिनीहरुको खुलेर प्रतिकार गरौं । नत्र भने हामीले बच्चा जन्माएर सिर्फ विदेश पठाउनका लागि हुनेछ ।
हामीलाई यो भूमिले जन्माएको हो । यो भूमिको डिमान्ड हो । सजिलै अरु ठाउँ जान बनाउने होइन,’ उनले भने”
२०७८ फाल्गुन २४, मंगलवार प्रकाशित 1 Minute 503 Views